Ishedyuli entsha yenqwelomoya yoMzantsi Afrika: Utshintsho, ukongezwa kunye nokurhoxiswa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ishedyuli entsha yenqwelomoya yoMzantsi Afrika: Utshintsho, ukongezwa kunye nokurhoxiswa
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziGqwesileyo zaseGhana • Iindaba eziBalulekileyo eMauritius • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo
Iindlela ze-AI zaseMzantsi Afrika
Inkampani yeenqwelomoya yaseMzantsi Afrika iyiNkwenkwezi yesithathu ethwala iNkwenkwezi e-Afrika, kunye neEgypt Air kunye ne-Ethiopian Airlines. Inkampani yeenqwelomoya namhlanje ibhengeza utshintsho kuthungelwano lwangaphakathi lwase-Afrika.
Emva kovavanyo ngononophelo lwemithamo yabakhweli eqhubekayo, i-SAA ihlengahlengisa iishedyuli zayo zokubhabha ukuze ihlangabezane neemfuno zabakhweli.
I-airline iya kususa kwishedyuli inkonzo yayo yokubuyisela imihla ngemihla eMaputo eMozambique. Esi sigqibo sisebenza ukususela nge-1 kaDisemba 2021, kwaye abakhweli abaphethe amatikiti baya kunikwa indawo kwiinqwelomoya ze-codeshare eziqhutywa yi-Mozambique Airlines, TM (LAM).
Usomashishini weThutyana oLawulayo we-SAA uSimon Newton-Smith uthi, “Xa i-SAA iqalisa ukusebenza kwakhona ekupheleni kukaSeptemba, sizibophelele ekubekeni iliso rhoqo umthamo wabakhweli kunye nengeniso kuzo zonke iindlela. Imfuno kule nkonzo ayikhange ihlangabezane nokulindelweyo kwaye okwangoku, olu tshintsho luhambelana nesicwangciso sethu sokulawula izinto elubala kunye noxanduva lwezemali. "
UNewton-Smith uthi ukuthatha iindlela ezimbini ezintsha, ukuya eLagos eNigeria naseMauritius kuyakhuthaza kwaye iinkonzo ezintsha kwezinye iindawo nazo zithathelwa ingqalelo ngo-2022.
Olunye uhlengahlengiso olwenziwayo kwixesha leeholide zikaDisemba '21 kunye noJanuwari'22, kungenxa yemfuno elindelekileyo ecothayo ngeentsuku eziqhelekileyo ezingezizo ezohambo, njengoko abathengi bechitha ixesha labo kunye neentsapho kunye nabahlobo.
Iinqwelomoya ezibuyayo eziya e-Accra eGhana zilungisiwe kwaye aziyi kusebenza nge-25 kaDisemba 2021 nangomhla woku-1 kuJanuwari 2022. Iinqwelomoya zaseKinshasa, e-DRC zilungelelanisiwe kwaye aziyi kusebenza nge-24 kaDisemba 2021 nange-31 kaDisemba 2021. Bonke abakhweli baya kuhlaliswa kwilandelayo iinqwelomoya ezifumanekayo ze-SAA.
I-SAA isebenze iintsuku ezi-4 ngeveki ukuya eLusaka ukusuka ngoSeptemba ukuya kwi-30 kaNovemba ka-2021. I-SAA iye yacwangcisa amaza ongezelelweyo okubhabha ngenqwelomoya iintsuku ezisi-7 ngeveki ukusuka ngoDisemba, nangona kunjalo uhlengahlengiso olongezelelweyo lwenziwa kwishedyuli yokusebenza iintsuku ezi-5 ngeveki ukusuka ngomhla woku-1 kuDisemba. Abakhweli abachaphazelekayo baya kuhlaliswa kwiinqwelo-moya ezilandelayo ezifumanekayo ze-SAA.
UNewton-Smith uthi, “Akukho nkampani yeenqwelo moya ethanda ukurhoxisa iinqwelomoya kodwa sizimisele kwimpumelelo nozinzo lwenkampani yethu yenqwelomoya, ngelixa sihlangabezana neemfuno zethu ezixabisekileyo zabathengi. Siyaxolisa kubathengi ngayo nayiphi na inkxamleko kwaye uncedo olupheleleyo luya kunikwa bonke abathengi abaphethe itikiti le-SAA kwiinqwelomoya ezirhoxisiweyo kwishedyuli.
Abathengi kufuneka babhekiselele kwiiofisi ezinikezela ngoncedo. ” Abagibeli abangasafuni ukuhamba banokulurhoxisa ukubhukisha kwabo kwaye bakwazi ukufumana imbuyiselo epheleleyo (kubandakanywa neerhafu) okanye bakhethe ivawutsha yekhredithi eya kunikwa uhlobo lwentlawulo yokuqala.
UNewton-Smith uthi abathengi ababhukishe nge-arhente yohambo kufuneka baqhagamshelane nabo ngokuthe ngqo kwaye ukuba amatikiti afakwe kwi-intanethi okanye ngeziko lemibuzo le-SAA abathengi banokuqhagamshelana neNkxaso yoRhwebo ye-SAA nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] Abathengi ababhukishe kwiziko lemibuzo le-SAA laphesheya kufuneka baqhagamshelane ne-ofisi ye-SAA ekufutshane nabo.